7 Argagixiso oo Dilal Gaalkacyo iyo Qaraxyo Bossaso lagu Qabtay oo la Dilay (dhegayso) – Radio Daljir
7 Argagixiso oo Dilal Gaalkacyo iyo Qaraxyo Bossaso lagu Qabtay oo la Dilay (dhegayso)
Juunyo 30, 2017 4:46 g 0
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay 7 nin oo lagu soo qabtay waxyaabaha qarxa iyo dilal ka dhacay magaalada Bosaaso.
5 kamid ah todoboda qof ayaa laga qabtay magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari xilli ay wateen gaari uu ku raranyahay waxyaabaha qarxa, halka mid lixaad uu dilal ka gaystay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida uu sheegay Xeer Ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland, Cabdulaahi Xirsi Cilmi.
Guddoomiyaha maxkamadda qaar ka mid ah gobolada Puntland Cawil Axmed Faarax oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay ragga dilka lagu fuliyay inay ku cadaatay dambiyada ay kusoo oogeen.
Mid ka mid ah ragga dilka lagu fuliyay ayaa qirtay in uu xaafadda Garsoor ku dilay nin ganacsade ah, deedna u baxsaday xaafadda Wadajir, waxaana soo wareejiyay maamulka Galmudug. Dilaagu wuxuu qirtay in uu yahay reer Gaalkacyo, dilal kaladuwana ka gaystay magaalada Gaalkacyo, wuuna wada qirtay dilalka.
Xukumada dilalka ah ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowladda Puntland ku jirto guluf dagaal oo ka dhan ah ururada Al-shabaab iyo Daacish, oo sida ay saaka Radio Daljir ku warisay wararkii galinka hore u guryo noqday deegaanada Geerigaabo iyo degmada Beer oo ah gobolka Togdheer (arag warka hoose).
Bilowgii Waxqabadka Iskutashiga Puntland iyo Buundada Midiggar (daawo)